Hormuud News Sunday, April 22nd, 2018 | 03:09
[Thursday, February 21st, 13] :: Maraykanka oo lacago hor leh siinaya Soomaaliya
Muqdisho (RH) Dowladda Maraykanka ayaa maanta ku dhawaaqday 20-milyan oo dollar oo dheeraad ah in ay siineyso Soomaaliya.
Madaxa hey’adda gargaarka dalka Maraykanka Dr. Rajiv Shah ayaa arrintan kaga dhawaaqay magaalada Muqdisho oo maanta uu booqasho ku tagay.
Dr. Shah ayaa kulamo gooni-gooni ah la qaatay madaxweynaha iyo ra’iisal wasaaraha, waxaana kulamadaas looga hadlay siddii hey’adda USAID u ballaarin lahayn gargaarka ay siineyso Soomaaliya iyo gargaarkaas uu hadda noqdo mid si-toos gacanta u soo mara dowladda Soomaaliya maadama laga baxay xilligii ku-meel-gaarka.
“Maanta waxaan maal-galin ku sameynaynaa dhallinyaradiina, beeralayda iyo xoola dhaqatada, ragiinna, dumarka iyo caruurtiina, si loo horumariyo caafimadka, wax-barashada iyo fursadaha kale.
Wuuu sii hadlay “Waxaan rabna inaan gacan qabanno Soomaalida si ay uga hortagaan dhammaan dhibatooyinka soo waajahda, ha ahadaan mid uu sababay bina’aadmiga ama mid dabiici ah ee ka dhashay deegaanka. Waxaan ku faraxsannahay inaaan ku dhawaaqno inaan bixini doonno 20 milyan oo doollar oo kale si loogu taageero waxyaabaha aan sheegnay oo dhan iyo waliba wax loogu qabta arrimaha deg-degga ah ee cunno-yarida” ayuu yiri Dr. Shah.
Intaa kaddib madaxweynaha Soomaaliya ayaa yiri: “Waan soo dhaweynayaa xiriirka iyo saaxibtinimadda Mareykanka iyo Soomaaliya, waana ugu mahad-celinayaa go’aanka dowladda Maraykanka ay qaadatay ee ku aadan inay si rasmi ah u aqoonsato dowladda Soomaaliya.”
Sidoo kale madaxa hey'adda gargaarka waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha iyo qaar ka mid ah golaha wasiiradda xukuumadda, waxaana kulankaas lagu soo hadal qaaday sidda dowaldda Maraykanka gargaar u siin lahayd Soomaaliya.
Kulanka waxaa ka qaybgalay wasiirka arrimaha dibedda iyo iskaashiga caalamiga ahna ra'iisal wasaare ku xigeen Marwo Fowsiyo Xaaji Aadan.
Booqashada Rajiv Shah, madaxa hey'adda gargaarka Maraykanka uu ku yimid magaalada Muqdisho ayaa ka dhigeysa mas’uulkii ugu sareeyay dowladda Maraykanka ee booqasho ku yimaada Muqdisho muddo sanado ah.
Maraykanka waxa uu dhawaan aqoonsaday dowladda Fedaraalka, iyadoona madaxweynaha Soomaaliya uu kula kulmay aqalka Cad Madaxweyne Brack Obama.
Mogadisho / Somalia
Shaqaalaha Radio Hormuud